Midadasika amin'ny velarana 367 292 ha : dimy ny faritra mando tantanin'ny MNP
Posted on février 4, 2019 by admin_tour
Dimy ny faritra mando sady efa nahazo ny label site Ramsar tantanin’ny Madagascar National Parks amin’ireo 20 misy manerana ny Nosy. Karazana fankasitrahana ny fahazoana ny diplaoma site Ramsar ho an’ny faritra arovana eto Madagasikara satria midika izany fa tsara tantana ny faritra ary misy rafitra mazava misahana izany miaraka amin’ny vondron’olona ifotony, hoy ny tale jeneralin’ny Madagascar National Parks, Ramangason Suzon Guy, omaly teny Antaninarenina.
Ankoatra ny fitantanana mahomby, eo koa ny fahafantarana ny zavatra rehetra misy ao amin’ny valanjavaboary ara-tsiansa&nbsp;: biby, zava-mainry, rano sy ny mampifandray ireo rehetra ireo ka ahafahany miara-miaina. Fepetra iray koa ny faneken’ny mponina eo amin’ny manodidina hiaraka hitantana ny vala sy ny fandraisana ny fizahantany manaja ny hasin’ny vala. Matetika, toerana fanasinana sy misy fady ny faritra mando site Ramsar tantanin’ny MNP ka mahasarotiny ny mponina mivelona manodidina azy. Toy izany ny faritra mando ao Ankarafantsika izay midadasika amin’ny velarana 33&nbsp;145 ha miaraka amin’ny farihy enina iveloman’ny voron-drano ahina ho lany tamingana sy ny trondro. Tombony lehibe amin’ny fanasokajiana ho site Ramsar ny valanjavaboary malagasy, lasa dokam-barotra ho an’ny firenena izany satria entanin’ny tomponandraikitra iraisam-pirenena hitsidika ireny site ireny ny vahiny ka mapandroso ny fizahantany.
Raha voaaro ny farihy noho ny hasina izay voatandro, mahita faisana kosa ny ala honko sy ny « récifs coralliens » noho ny fitrandrahana samihafa ataon’ny olona. Mirefy 367 292 ha ny faritra mando dimy tantanin’ny MNP. Nomarihina omaly ny andro maneran-tany ho an’ny faritra mando.
Loharano : NewsMada ny 04 febroary 2019/Vonjy A.